ट्रम्पको पत्र टर्कीका राष्ट्रपतिले फालिदिए टोकरीमा ! – Khabar Silo
ट्रम्पको पत्र टर्कीका राष्ट्रपतिले फालिदिए टोकरीमा !
अंकारा : टर्कीका राष्ट्रपति रिसेप तायीप एर्डोगनले अमेरिकी राष्ट्रपतिबाट पाएको पत्र टोकरीमा फ्याँकिदिएका छन् ।यही ९ अक्टोबरमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले एर्डोगनलाई सिरिया युद्धबारे पत्र पठाएका थिए । पत्रमा टर्कीलाई युद्ध विरामका लागि आग्रह गर्दै एर्डोगनलाई अनुरोध गरेका थिए, ‘कठिन नबन, मुर्ख नबन !’
पत्रमा ट्रम्पले लेखेका थिए, ‘हामी मिलेर राम्रो काम गरौँ ! तपाईँ हजारौँ मानिस मार्ने कामको जिम्मेवार बन्न चाहनुहुन्न । र म टर्कीको अर्थतन्त्र नष्ट गर्न जिम्मेवार बन्न चाहन्नँ ।’
ट्रम्पले एर्डोगनलाई उत्तरी सिरिया सैनिक कारवाही नगर्न भन्दै पत्र पठाएका हुन् । यससँगै उनले टेलिफोन मार्फत पनि युद्धविराम गर्न आग्रह गर्दैआएका थिए । एर्डोगनले भने ट्रम्पको आग्रह विपरीत आफ्ना सेना सिरियामा पठाएका थिए ।
बिबिसीका अनुसार उनले ट्रम्पको आग्रह इन्कार गर्दै पत्र टोकरीमा फालिदिएका थिए । अमेरिकी सरकारले भने आफ्ना विदेशमन्त्री माइक पोम्प्योलाई युद्धविरामको पहल गर्न भन्दै अंकारा पठाएको छ । एर्डोगनले उक्त पत्र पूरै इन्कार गरिदिएको बिबिसी टर्किसले जनाएको हो ।
अमेरिकामा रहेका चिनियाँ कूटनीतिज्ञले अमेरिकी अधिकारिहरूसँग कुनै पनि भेटवार्ता गर्नुअघि अमेरिकी सरकारलाई जानकारी गराउनुपर्ने भएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार शैक्षिक संस्था वा अनुसन्धान केन्द्रको भ्रमण गर्दा पनि चिनियाँ कूटनीतिज्ञहरूले अमेरिकी अधिकारीहरूलाई पहिला नै दरखास्त दिनुपर्नेछ। चीनले अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय नियमको उल्लङ्घन गरेको प्रतिक्रिया दिएको छ। तर अमेरिकाले चीनमा रहेकाआफ्ना कूटनीतिज्ञहरूले पनि त्यस्तै प्रकृतिको अवरोधहरूको सामना […]
Posted on November 16, 2021 Author khabar silo
काठमाडौ । जहाज दुर्घटनामा सबै जनाको ज्या’न जाँदा एक ११ वर्षकी बालिका भने बाँच्न सफल भइन् । यो आश्चर्यलाग्दो घटना शनिवार अमेरिकामा भएको हो । एउटा सानो जहाजमा पाइलट सहित ५ जना थिए जसमा एक बालिका बाहेक सवैको मृत्यु भयो । ति भाग्यमानी बालिका हुन् लेनी । उनलाई बुवाले बचाएका थिए तर बुवाले भने संसार […]
महामारीकाबीच विद्यालय सञ्चालन गर्ने दिने ट्रम्प प्रशासनको तयारी
काठमाडौं – कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र बनेको अमेरिकामा विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउन अनुमति दिने ट्रम्प प्रशासनले तयारी गरेको छ । ह्वाइट हाउसको कोरोनाभाइरस कार्यदलको नेतृत्व गर्दै आएका उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले अब बालबालिकालाई विद्यालय पठाउने बेला आएको बताए। तर, सङ्क्रामक रोगसम्बन्धी विशेषज्ञ तथा ह्वाइट हाउसका सल्लाहकार डा. एन्थोनी फाउचीले अमेरिका कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणको पहिलो लहरकै खतरा अहिले पनि […]
निशाले सार्वजनिक गरिन् आफैँले स्तनपान गराएको तस्बिर